ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့်ဇနီး၊ တိုင? - Yangon Media Group
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့်ဇနီး၊ တိုင?
ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဇနီး ရွှေဆည်းလည်းများ ကပ်လှူပူဇော်နေစဉ်။
ရန်ကုန်၊ မတ် ၉ – ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ဦး ဆောင်မှုဖြင့် ရွှေတိဂုံစေတီတော် မြတ်ကြီးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့်ဇနီး၊ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အလှူ ရှင်များမှ ရွှေစင်ရွှေပြား ၂ဝဝ ကျော် နှင့် ရွှေဆည်းလည်းများ လှူဒါန်း ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါရွှေစင်ပြားနှင့် ရွှေ ဆည်းလည်းများ ကပ်လှူပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကို မတ် ၉ ရက်တွင် ရွှေတိဂုံစေတီတော် စနေထောင့်ရှိ ရခိုင်တန်ဆောင်း၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့်ဇနီး တို့မှ ခြောက်ကျပ်သား ရွှေစင်ပြား တစ်ချပ်နှင့် သုံးကျပ်သားရွှေဆည်း လည်း တစ်လုံးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ် ကျ လှူဒါန်းခဲ့သည်။
”ရွှေပြားသင်္ကန်းကပ်ချင် တယ်။ ရွှေဆည်းလည်းလှူဒါန်း ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်တို့က ဆောင်ရွက်တာ။ အစ်မတို့ကတော့ ကုသိုလ်ပါဝင်တာပါ။ ဝန်ကြီးချုပ် နဲ့ ဇနီးက ခြောက်ကျပ်သားရွှေစင် ပြားတစ်ချပ်၊ သုံးကျပ်သား ရွှေ ဆည်းလည်းတစ်လုံး၊ ရုံးအဖွဲ့ထဲ ကပဲ ပတ်သက်တဲ့အလှူရှင်တွေ ဦးအောင်စိုးတို့မိသားစု၊ ဦးတင့် နိုင်စိုးတို့မိသားစုနဲ့ ဦးလွှမ်းမိုး အောင်တို့ မိသားစုကလည်း ရွှေ သားခြောက်ကျပ်သား၊ တစ်ချပ်စီ သုံးချပ်၊ ရွှေဆည်းလည်း သုံးကျပ် သား နှစ်လုံး၊ အစ်မတို့ ဦးအောင် မင်းဟန်၊ ဒေါ်ခင်လှမြင့် မိသားစု ကတော့ သုံးကျပ်သား ရွှေဆည်း လည်းတစ်လုံး၊ ဦးတင့်နိုင်စိုးတို့ မိသားစုကလည်း ရွှေဆည်းလည်း တစ်လုံး စသဖြင့်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီး ဘုရားပွဲတော်၊ တပေါင်းပွဲတော်လည်းနီးတယ်။ဘုရားရဲ့ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်လည်း နီးတော့ ဘုရားကိုရောင်တော်ဖွင့် တာတို့ ရွှေသင်္ကန်းပြန်လည်ကပ် လှူတဲ့အချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တော့ ဒီ လိုလေးလှူဖို့ စိတ်ကူးမိတာပါ။ ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးက စလှူတော့ အစ်မတို့လည်း ပူးပေါင်းလှူတာ ပါ။ ရွှေသံလွင်ကလည်း လှူတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကတော့ အားလုံး လေးအုပ်စုက လှူတယ်။ ဒီနေ့မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးလည်း လှူတယ် လို့သိရပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဒုညွှန်ကြား ရေးမှူး ဒေါ်ခင်လှမြင့်က ပြောသည်။
ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီမှ နာယက ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်နီနီကလည်း ရွှေစင်ရွှေပြားတစ်ချပ် ကပ်လှူဒါန်း ခဲ့ရာ ဒေါက်တာဒေါ်နီနီကိုယ်စား ဦးစည်သူက ကပ်လှူပေးခဲ့သည်။
”ရွှေသံလွင်က ခြောက်ကျပ် သား ရွှေစင်ရွှေပြားတစ်ချပ်ကို ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးမှာ ကပ်လှူပူဇော်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ရွှေသံ လွင်မှ ဦးစည်သူက ပြောသည်။
အပျော်တမ်း လိဂ်ပြိုင်ပွဲများကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ များတွင် ကျင်းပမည်
အသက် ၁ဝ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်ကို အဓမ္မကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သော တရားခံကို သေဒဏ် ချမှတ်